China Factory Direct High Quality N'èzí Home Ọdụdọ Remote Control Smart nkwụnye WiFi UK emepụta na suppliers | OPLỌ
APP Njikwa Remote: Tụgharịa ma ọ bụ gbanyụọ eletrọnịkị n’ebe ọ bụla na ekwentị gị nwere iji ngwa Meross. Nwere ike ịlele ịhụ ọnọdụ nke ejikọrọ ngwaọrụ site na ebe ọ bụla oge ọ bụla. A na-ebunye data niile ma chekwaa site na iji sava AWS na US.
Njikwa olu: Jikwaa ngwaọrụ gị aka n'efu, naanị mee iwu olu ka ịgbanwuo / gbanyụọ ngwaọrụ ndị ejikọrọ. At Kwekọrọ n'Ozizi na Amazon Alexa, Google nnyemaaka na SmartThings. Adịghị akwado Apple Homekit. Biko gbadaa ala ma lelee "Nkọwapụta Nka na ụzụ-Ntuziaka Onye Ọrụ" iji hụ usoro nhazi ọhụụ.
Njikọ a pụrụ ịdabere na ya: Otu Chipset Supplier na Amazon Echo. Meross smart plugs na Mediatek Iot chipset na-enye chipset maka Amazon Echo smart ọkà okwu. Chipsetị dị ike na-eme ka plọg wifi meross dị mma karịa ndị ọzọ. Ike nke ogologo oge WiFi njikọ na ọnụego nkwụsị karịa ọtụtụ n'ime ndị asọmpi ya.
Schetọ oge na Timmer Setting: cannwere ike ịtọọ oge ejikọrọ na ngwaọrụ iji gbanye ma gbanyụọ ya na akpaghị aka. Agbakwunyere uru nke ịchekwa ike mgbe ọkụ adịghị mkpa ma ọ bụ hapụ na mberede. Kwado ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ.
Ogo na Ọrụ: Ejiri plọg na-ere ọkụ na-ere mini mini, a kwadoro ya maka nchekwa na mmesi obi ike. Akwụkwọ ETL na FCC gbara USA. Ọ na-akwado ngwaọrụ ụlọ ọ bụla ruo 16A. Nsogbu ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị n'enweghị oge ọ bụla ma anyị ga-ahụ azịza ruo mgbe afọ juru gị.
Akwụkwọ ikike 3 ọnwa-1year
Asambodo FCC / ROSH
Nọmba nlereanya SNW-201
Gosiri Ugbu A 16A
Nke gara aga: Factory Price Manufacturer Supplier Meter Power Statistics Digital WiFi Smart Nkwụnye 16A UK nkwụnye Mini
Osote: Factory Direct High Quality Mita Power Statistics Smart WiFi nkwụnye
High Quality N'ogbe Omenala Cheap Meter Power ...
Factory Hot Sale US UK EU 6A 100-240 volt Smart ...
Factory Mere 100-250V 3USB + Type-C Eu nkwụnye Powe ...